Mareykanka oo war ka soo saaray weerar ay A-Shabab ku qaadeen saldhig ku yaalla Kenya | Hangool News
War qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee (AFRICOM) ayaa lagu sheegay in uu jiro weerar ay Al-Shabab ku qaadeen Saldhigaasi
Warka qoraal ah ee ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee (AFRICOM) ayaa lagu beeniyay sheegashada Al-Shabab ee ah in weerarkaasi ay khasaaro ku geysteen taasi oo Mareykanka ku tilmaameen “buun-buunin,”.
“Al-Shabaab waxay miciin bideen been, si ay sare ugu qaadaan sumcadooda ayna u abuuraan cinwaano been abuur ah,” waxaa sidaasi sheegay Janaraal William Gayler, oo ah agaasimaha (AFRICOM) .
Sarkaal ka tirsan dowladda deegaankaas oo lagu magacaabo Irungu Macharia, ayaa sheegay in ciidammada ammaanka ay weli ku jiraan howlgalka hasayeeshee waxa uu diiday inuu xaqiijiyo inay jirto cid weerrarkaas ku waxyeelowday.
Image captionKooxaha gurmadka degdega ah oo wada maydka qof ku dhintay qaraxii 28-kii Diseembar
Ururka Al-Shabaab oo xiriir la leh ururweynaha Al-Qaacidah ayaa dagaal kula jira dowladda Soomaaliya ee ay baritaarto Qaramada Midoobay, waxa ayna gudaha Soomaaliya ka gaystaan weerraro ay dad badan ku dhintaan.
Waxaa ugu dambeeyay qaraxii 28-kii bishii Diseembar ka dhacay bar koontarool oo ku taal magaalada Muqdisho, halkaas oo inta la og yahay naftooda ay ku waayeen in ka badan 80 qof.
Sidoo kale in ka badan 120 qof oo kale ayaa ku dhaawacantay qaraxaas oo ka dhacay isgoys aad u mashquul badan, waxaana weli jira dad aanan nolol iyo geeri midna lagu hayn.
Dadka qaraxaas ku dhintay waxaa ka mid ah laba qof oo u dhalatay Turkiga, sida ay xaqiijisay safaaraddooda Muqdisho oo barteeda Twitter-ka ku qortay arrintaas.